PSG FC Caah Thawngpang Chia Ngai – VAURAWNG
PSG FC Caah Thawngpang Chia Ngai
January 30, 2019 vaurawng.com Sport 0
PSG FC Caah Thawngpang Chia Ngai Si
#Breaking_News : Manchester United He Champion League chuih dingmi Puai2Ning In Neymar Ai Tel Kho Lai Lo Tiah PSG nih fehternak an tuah..
Neymar cuake ai khawh ruangah zarhkhat deng ai dinh nak asi cang, cu ai khawhmi cu zeitluk in dahafah ti mi PSG lei nih thawngfiang an langhter mi cuaum lem lo.
Tu ni ah PSG nih Neymar ai khawn mi kong he pehtlai in pungning tein fakthanhnak an tuah i zarh 10 chung hrawng ai dinhahau tiah fehternak an tuah. Cu ruangah Brazil le PSG Star Neymar cu Manchester United he champion league puai2an chuih mi ah ai tel kho lai lo tiah theih asin.
PSG nih tu bantuk in Neymar ai hliam mi kong he pehtlai in thawngzamhnak phung ning tein tuah nak ding caah Brazil team sii bawi hna zong an auh hna i, Neymar thlop nak caahathabik asi lai tiah an ruah mi i ceihnak le biakkhiahnak an tuah.
Neymar iapa nihachin mi cu “ka fapa Neymar hi zapi nih ai titer inatlu miasi tiah an ti bantuk in, Refree hna nihaherh mi kilven nakaum lo tiah thinhang pah nawn inachim i, ka fapa Neymar iachun mang hrawh dingin an i zuam bia asi tiahachim.
#Breaking_News : ယူနိုက်တက် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်2စလုံးကို နေမာ လွဲချော်မယ်လို့ PSG အတည်ပြု
ဒီကနေ့မှာတော့ PSG ဟာ နေမာရဲ့ ဒဏ်ရာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားဝင် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကာ 10 ပတ် အကြာအထိ အနားယူရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြု သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘရာဇီး ကစားသမားဟာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်2ခု စလုံးကို သေချာပေါက် လွဲချော်တော့မှာပါ။
PSG က အခုလို နေမာ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းကို တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာနိုင်ဖို့ အတွက် ဘရာဇီး အသင်းက ဆရာဝန်တွေကိုပါ ခေါ်ယူခဲ့ရပြီး ၊ ကစားသမားအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေမယ့် ကုထုံးကို တိုင်ပင်ပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေမာရဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူကတော့ သူ့ရဲ့ သားဟာ ပရိသတ်တွေက ဟန်ဆောင်လှဲချတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရသလို ၊ ဒိုင်တွေကလဲ လိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးခြင်း မရှိဘူးလို့ ဒေါသတကြီး ပြောဆိုလိုက်ပြီး ၊ နေမာရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖျက်စီးဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
Mei Kanghnak le Hmape , Takvun Zohchia mi Holh Ning
Thantlang Baptist Church Nih Sak An I Timhmi Innpi Cu A Ropui Bak